Kadinka - Somali Mission
Somali	English	HAWLAHA LUTERANKA SOOMAALIDA
"Afka fur oo u hadal kuwa aan iyagu hadlan karin, oo xaqooda sug dhammaan kuwa dhibban. Afka fur, oo si xaq ah u garsoor; oo miskiinka iyo saboolka xaqooda difaac." (Maahmaahyadii 31: 8-9)
CIIDDA MASIIXIGA OO LAGA MAMNUUCAY SOOMAALIYA	Talaado, December 24, 2013 (HOL) Wareegto kasoo baxday wasaaradda garsoorka iyo arrimaha diinta dowladda federaalka Soomaaliya ayaa lagu mamnuucay in gudaha dalkeena Soomaaliya lagu xuso ama lagu weyneeyo ciidaha masiixiga. Wareegtada ayaa lagu sheegay in Soomaaliya oo dhan aan lagu xusi karin maalmahaa cidda masiixiga, kaddib shir jaraa’id oo ay wadajir u qabteen agaasimaha guud ee wasaaradda garsoorka iyo diinta, Sheekh Maxamed Khayroow Aadan iyo agaasimaha waaxda diinta ee wasaaradda, Sheekh Cali Sheekh Maxamuud (Cali Dheere). Halkan ka akhriso
WAA MAXAY XORRIYADDA MASIIXIGU?	H. M. S., Diseembar 2, 2013 “Xorriyad ayuu Masiixu inagu xoreeyey. Haddaba adkaada, oo mar dambe yaan laydinku qaban harqoodka addoonnimada.” (Galatiya 5:1)
XORRIYADDA CALMAANIGA AH
Macnaha Xorriyadda Calmaaniga ah?
Xorriyad waa xaqa uu qof u leeyahay inuu sameeyo waxa uu doonayo; inuu go’aan ka gaadho arrimihiisa; inuu muujiyo fikirkiisa; inuu socdaalo isagoon wax xayirayaa jirin. Waa xaalad aanay nolosha qofka saamayn ku lahayn xasilooni-darro. Waa marxalad ay nolosha qofku ka haqabtiran tahay dhammaan baahiyaha daruuriga ah.
Halkan guji	KANIISAD LAGU GUBAY MOMBASA	Jimco, Oktoobar 04, 2013 (HOL) — Dhallinyaro Musliimiin ah ayaa gubay maanta oo Jimco ah kaniisad ku taalla magaalada Mombasa ee dalka Kenya, kaddib markii xalay halkaas lagu dilay Sheekh Ibraahim Cumar oo ka mid ahaa wadaada caan ah ee dalka Kenya iyo saddex qof oo kale, kaddib markii kooxo hubeysan ay rasaas fureen.
Sidoo kale, dhallinyaradan ayaa waxay gubeen shaagag iyadoo la sheegay in qof uu ku dhintay rasaas ay fureen ciidamada ammaanka Kenya halka ay ku dhaawacmeen 18-qof oo kale. Halkan guji
HARGEYSA OO DACWAD LAGU SOO OOGAY DAD MASIIXIYIIN AH	Isniin, May 27, 2013 HOL
Maxkamad degmadda Hargeysa, ayaa shalay ka furantay dacwad ka dhan ah saddex qof oo Itoobiyaan ah oo lagu eedeeyey fasahaadin diimeed, kaas oo mudaddii u dambeeyey kiiskoodu ka socday maxkamadda.
Kiiskan oo ah mid xasaasi ah, ayaa kooxdan lagu eedeeyey inay dalka ka wadeen fidin diin aan ahayn diinta Islaamka, kaas oo dastuurku mamnuucay, haseyeeshee aanay illa hadda jirin xeer ciqaabeed lagu dhaqi karo dambi noocaas ah cidda gasha, taas oo dood ka dhalisay xeer ilaalintii dacwadan waday iyo looyarkii u doodayey kooxdan lagu eedeeyey fidin diin aan islaam ahayn. Halkan ka akhri.
Wada akhri	BAM LAGU QARXIYAY KANIISAD KU TAALLA GARISSA	Axad, Nofembar 4, 2012.
Bambo maanta lagu tuuray kaniisad ku taalla Garissa, magaalo-madaxda gobolka Waqooyi-bari ee waddanka Kenya ayuu ku dhintay qayskii kaniisaddu, ugu yaraan 11 kalena ay ku dhaawacmeen. Dad ku sugnaa kaniisadda qaraxa lala beegtay ayaa warbaahinta u sheegay in qaraxa ay fuliyeen laba nin oo hubeysan, kuwaasoo bambaano kusoo tuuray dhismaha ay ku taal kaniisadda, markaa kadibna rasaas ooda uga qaaday dadkii isugu yimid halkaasi.
Hay’adda laanqeyrta cas ee Kenya ayaa boggeeda Twitterka ku xaqiijisay in qaraxa ay ku dhaawacmeen ilaa 11 qof, kuwaasoo sedex kamid ah ay xaaladooda halis tahay.
Wada akhri	KANIISAD KU TAALLA NAIROBI OO BAM LAGU QARXIYAY SM, Axad, September 30, 2012
Warka aanu ka hellay magaalada Nairobi, ee waddanka Kenya ayaa sheegaya in hal ilmo uu ku dhintay, shan kalena ay ku dhaawacmeen kaddib markii bam gacmeed lagu tuuray kaniisad ku taalla deegaanka Kamakunji ee magaalada Nairobi oo ay ku taallo xaafadda Islii ee ay Soomaalidu deggen tahay.Afhayeen u hadlay booliiska Kenya oo lagu magacaabo, Charles Owino ayaa sheegay in weerarka lagu qaaday goob ay caruurtu kaga sugnaayeen Kaniisadda, isagoo sheegay in booliisku ay ku jiraan baaritaanno ku saabsan sida uu qaraxan ku dhacay.
Wada akhri	BAARLAMAANKA SOOMAALIYA OO DOORTAY MADAXWAYNE	Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ku guulaystay codbixintii uu baarlamaanku u qaaday jagada madaxwaynaha Soomaaliyaa
SM, Isniin, September 10, 2012
Waxaa si aqlabiyad leh ugu guuleystay madaxweynenimada Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo wareeggii ugu dambeeyay ee doorashada madaxweynenimada Soomaaiya uga adkaaday Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed.
Halkan guji	BAARLAMAANKA SOOMAALIYA OO DOORTAY GUDDOOMIYE	Waxaa maanta guddoomiyahay baarlamaanka Soomaaliya loo doortay Prof. Maxamed Sh. Cismaan Jawaari, kaddib markii ninkii ay loolamayee Prof. Cali Khaliif Galleyr, uu tanaasulay. Talaado, Agoosto 28, 2012
Guddiga guddoonka doorashada baarlamaanka Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in Prof. Maxamed Cismaan Jawaari uu si rasmi ah u noqday afhayeenka baarlamaanka Soomaaliya kaddib markiii uu tanaasulay Prof. Cali Khaliif Galleyr oo ay isugu soo hareer wareeggii ugu dambeeyay.
Guddiga ayaa sheegay in Prof. Jawaari uu helay wareeggii koowaad 119 cod halkii laga doonayay 139 cod, balse tanaasulka uu sameeyay Prof. Galleyr ay sababtay inuu noqdo guddoomiyaha rasmiga ah ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya.
Halkan guji	KANIISADDII KISMAAYO OO LA BURBURIYAY	02 Okt. ‘08 Kismaayo - Wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada dhexe ee Soomaliya ayaa sheegaya wadaadada Muslimka asallraaca ah ee qabsaday magaalada Kismaayo in ay burburiyeen dhismihii kaniisadda Kaatoogu ay ku lahayd magaalada Kismaayo. Wuxuu warku intaa ku darayaa in ay wadaadadu sheegeen in ay meeshaasi dhismuhu ku yiil u badali doonaan masaajid ay Muslimiintu ku tukadaan.
Sheekooyin Kitaabka Qudduuska oo Caruurta